ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ »6မေးခွန်းများစုံတွဲတစ်ပေရယူခြင်းခင်မှာစဉ်းစားသင့်
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: ဇန်နဝါရီ. 19 2021 |3မိဖတ်ပြီးသား
ကပုံဖော်: သင်တို့ကိုအထူးတစ်စုံတစ်ဦးကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်, နှင့်သင်တို့၏ဆက်ဆံရေးအတွေးတွေဖြစ်ပါတယ်. သင့်ရဲ့သိသာထင်ရှားတဲ့အခြားခုန်ယူပြီးအချင်းချင်းတစ်ဦးကတိကဝတ်အောင်အကြံပြုကြသောအခါသင်တို့မူကားအဘယ်သို့ပြုကြပါ…အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ရဖို့အားဖြင့်? သင်သည်သင်၏အသက်တာကိုအသစ်သောခွေးသို့မဟုတ်ကြောင် add မပြုမီ, စိတ်ထဲတွင်အောက်ပါမေးခွန်းများကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းစဉ်းစား.
သင့်အသက်တာ၌တိရစ္ဆာန်ထားရှိခြင်းသည်တစ်ဦးကျိုးနပ်နှင့်အသက်-အတည်ပြုအတွေ့အကြုံရနိုင်ပါသည်. ဒါဟာအစစျေးကြီးနှင့်အချိန်ကုန်စေနိုင်ပါတယ်, နှင့် ASPCA တစ်ဦးအလတ်စားခွေးကိုခန့်မှန်းပျမ်းမျှကုန်ကျနိုင် $1,580 စားစရာဘို့တစ်နှစ်လျှင်, တိရိစ္ဆာန်ဆရာကုန်ကျစရိတ်, နှင့်အခြားစောင့်ရှောက်မှု, ကြောင်တစ်ကောင်၏ပျမ်းမျှကုန်ကျနိုင်နေစဉ် $1,035 တစ်နှစ်လျှင်. အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ရဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ဖြစ်သင့်, သင်အမှန်တကယ်ခွေး add မီနှင့်ရှည်လျားသောစေခြင်း, ကြောင်, သင်၏အသက်တာမှသို့မဟုတ်အခြားတိရစာန်. သင့်ရဲ့သိသာထင်ရှားတဲ့အခြားအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ရှိသည်တွန့်ဆုတ်လိမ့်မည်စိတ်ထဲထားပါ; သောအမှုဖြစ်လျှင်, ထို့နောက်သူတို့သဘောထားကိုလေးစားလိုက်နာနှင့်အိမ်အသစ်တစ်ခုကိုတိရစ္ဆာန်အသို့ဆောင်ခဲ့အပေါ်ကိုချွတ်ကိုင်ပြီးစဉ်းစားပါ. သင်တစ်ခုခုကိုပြီးသားအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ရှိပါတယ်မယ်ဆိုရင်, ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုမချပြီးမှသင်တို့၏တိရိစ္ဆာန်တို့ရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါသည်.
သင်က Labrador နှင့်အတူပန်းခြံတွင်စနေနေ့နံနက် jogs ပုံဖော်နေတယ်ဆိုရင်, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့သိသာထင်ရှားတဲ့အခြားငါးများနှင့်အတူဧရာအကြံပေးအဖွဲ့သူတွေနဲ့စဉ်းစားသည်, ထို့နောက်သင်နှစ်မျိုးစလုံးချင်တယ်တိရစ္ဆာန်၏အဘယ်သို့သောအမျိုးအစားနှင့် ပတ်သက်. ပြောဆိုရန်လိုအပ်ပါတယ်. သင်သို့မဟုတ်သင့်သိသာထင်ရှားသောအခြားရှိသည်မဆိုဓာတ်မတည်အကောင့်သို့ ယူ., သင့်ရဲ့လက်ရှိနေထိုင်မှုနေရာများ၏အရွယ်အစား, သင့်ရဲ့အလုပ်အချိန်ဇယား, နှင့်ဘဏ္ဍာရေးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်အပေါ်ဆုံးဖြတ်ခြင်းသည့်အခါ. သင်လုပ်ချင်တဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ၏အရွယ်အစားကိုဆွေးနွေးရန်ဤအခ​​ွင့်အလမ်းကိုအသုံးပြုပါ, လွန်း. တစ်ဦးကပိုကြီးတဲ့ခွေးငယ်လေးတစ်အိတ်ထဲ၌လောင်းလျက်ရှိခွေးတစ်ကောင်ထက်ပိုစိန်ခေါ်မှုများနှင့်ကုန်ကျစရိတ်ကိုတင်ပြနိုင်ပါသည်.
သင်နှင့်သင့်သိသာထင်ရှားသောအခြားသင်လိုချင်တိရစ္ဆာန်အမျိုးအစားအပေါ်သဘောတူညီခဲ့ကြသည်ပေမဲ့, လည်းသင်ချင်တယ်မည်မျှအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအပေါ်သဘောတူရန်လိုအပ်ပါတယ်. တစ်ဦးချင်းစီအပိုဆောင်းအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်နှင့်အတူ, သင်၏တာဝန်နှင့်တိရစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်သူနဲ့ဆက်စပ်ကုန်ကျစရိတ်များလည်းတိုးမြှင့်စေမည်. စိတ်ထဲ၌သင်တို့ကိုရှိနိုင်သည်မည်မျှတိရိစ္ဆာန်များ၏အသုံးအနှုန်းအတွက်လျှောက်ထားစေခြင်းငှါမဆိုစည်းမျဉ်းများနှင့်စည်းမျဉ်းကိုသိမ်းဆည်းထားပါ, သင်တစ်ဦးငှားရမ်းခြင်းအတွက်အထူးသဖြင့်ဆိုရင်.
တချို့စုံတွဲ, အတူတကွနေထိုင်နေအကြောင်းရင်းများစွာအတွက်ရွေးစရာတခုမဟုတ်ပါဘူး. သင်နှင့်သင့်သိသာထင်ရှားသောအခြားအတူတကွနေထိုင်နေကြသည်မဟုတ်ခဲ့လျှင်, သို့ဖြစ်. သင်တို့သည် Fido သို့မဟုတ် Fluffy အသက်ရှင်လိမ့်မည်အဘယ်အရပ်မှဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်. ဥပမာအားဖြင့်, သင်ရက်သတ္တပတ်အတွင်းမှာသင့်ရဲ့မိတ်ဖက်ရဲ့ home အတွက်သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်ရန်ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်, သင်တို့ကိုတနင်္ဂနွေပေါ်တွင်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ရှိသည်နေစဉ်? အစီအစဉ်တစ်ခုအပေါ်ကိုဆုံးဖြတ်သောအခါ, သင့်ရဲ့အလုပ်အချိန်ဇယားနှင့်လက်ရှိအိမ်သို့မဟုတ်တိုက်ခန်းတွင်အချက်တစ်ချက်.
သင်နှင့်သင့်သိသာထင်ရှားသောအခြားပုံမှန်အားခွဲထွက်ကုန်ကျစရိတ်ဆိုရင်, ထို့နောက်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုအတွက်တာဝန်ရှိသောသူသည်ဆုံးဖြတ်ခြင်း moot ဖြစ်မည်အကြောင်း. သို့သော်, သင်အမြဲအညီအမျှကုန်ကျစရိတ်ခွဲထွက်မပြုလျှင်, သို့မဟုတ်သင်တဦးသည်အခြားထက်သိသိသာသာပိုစေတယ်ဆိုရင်, တိရစ္ဆာန်ဆေးကုသရေးဥပဒေကြမ်းများနှင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစားအစာအတွက်ပေးဆောင်သင့်ဆုံးဖြတ်ခြင်းသင်အိမ်မှာအသစ်တစ်ခုကိုကြောင်တစ်ကောင်သို့မဟုတ်ခွေးကိုဆောင် ခဲ့. ရှေ့တော်၌အသင်တို့၏သိသိသာသာအခြားနှင့်အတူရှိသင့်တဲ့ဆွေးနွေးချက်.
သင်နှင့်သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်၏တစ်ဦးအထူးသဖြင့်အမျိုးအစားရတဲ့အပေါ်သဘောတူညီခဲ့ကြသည်နိုင်ပါသည်. သို့သော်ရှိရာအရပ်၌သင်တို့အသစ်ရဲ့ခွေးကိုတွေ့ရှိရပေမည်, ကြောင်, သို့မဟုတ် hamster? သင်ဟာသူတယောက်စတိုးဆိုင်သို့မဟုတ်မျိုးဆက်များမှဝယ်, အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များနှင့် ပတ်သက်. ခိုင်မာခံစားချက်တွေကိုရှိပါတယ်. သောအမှုဖြစ်တယ်ဆိုရင်, သင်ပုန်းတွင်ရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်နှင့်သင်တိရစ္ဆာန်ရှာဖွေနိုင်သောနေရာနှင့် ပတ်သက်. သဘောတူနှစ်မျိုးစလုံး.
အမျိုးအစားကိုနှင့် ပတ်သက်. သင်၏သိသာထင်ရှားသောအခြားတစ်ဦးပွင့်လင်းဆွေးနွေးမှုထားရှိခြင်းနှင့်မည်မျှတိရိစ္ဆာန်များတို့၏ဆက်ဆံရေးအတွက်အရေးကြီးတဲ့အဆင့်တခုဖြစ်ပါတယ်. ရိုးသားဖို့နဲ့အချင်းချင်းရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်ကိုတန်ဖိုးထားဖို့သတိရပါ.
10 တစ် Bodacious Bachelorette Pad ဖန်တီးရန်နည်းလမ်းများ!
How to Make Long-Distance Relationships Work
© Copyright 2021 ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့. နှင့်ဖွဲ့ အားဖြင့် 8celerate စတူဒီယို